Amagqwetha aQokelela amaTyala e-Netherlands - Law & More
Ukuqokelelwa kwamatyala igqwetha
Kwinkqubo nganye yokuqokelela, inani lamanyathelo kufuneka athatyathwe. Inyathelo lokuqala kukwazisa lowo unetyala ukuba akaphumeleli uxanduva lokuhlawula. Oku kungenxa yokuba kufuneka umnike ithuba lokuhlawula ngaphakathi kwexesha elifanelekileyo ngaphandle kweendleko ezingaphezulu. Kufuneka uthumele umntu okweletayo ngesikhumbuzo esibhaliweyo malunga noku. Esi sikhumbuzo sibizwa ngokuba sisaziso sokungasasebenzi Ixesha leentsuku ezilishumi elinane lihlala lithathwa njengexesha elifanelekileyo apho umtyali acelwe ukuba ahlawule ibango. Kunjalo, Law & MoreAmagqwetha anokukuchwethelela isaziso sokwendalo.
Ukuba inqanaba loxolo alinakugqitywa ngentlawulo yomntu onetyala okanye ngolungiselelo lwentlawulo, iinkqubo zomthetho zinokuqaliswa. Kuyenzeka ukuba weqe inqanaba loxolo kwaye uqale iinkqubo zomthetho kwangoko. Kwinqanaba lezomthetho, sibanga ukuhlawulwa kwemali esaseleyo kunye neendleko zokuqokelela phambi kwenkundla. Phambi kokuba kuqale iinkqubo zomthetho, kusenokwenzeka ukuba kuhluthwe ipropathi yalowo unetyala. Oku kubizwa ngokuba kukuhluthwa kulondolozo. Ukuncamathiselwa kokugweba kwenzelwe ukuqinisekisa ukuba umntu onetyala akakwazi ukuhambisa ipropathi ngaphambi kokuba inkundla ikhuphe isigwebo, ukuze ukwazi ukubuyisa iindleko zakho kulowo unetyala. Ukuba ijaji inika ibango lakho, isincamathiselo sokukhusela siya kuguqulwa sibe sisincamathiselo esinyanzelekileyo. Oku kuthetha ukuba ii-asethi eziqhotyoshelweyo zingathengiswa nge-bailiff esidlangalaleni ukuba umntu onetyala akakahlawuli. Ingeniso yezi asethi iya kusetyenziselwa ukuhlawula ibango lakho. Law & MoreAmagqwetha okuqokelelwa kwetyala anamava kwicandelo lomthetho wokuncamathisela kwaye ayonwabile ukukunceda ngexesha lenkqubo yezomthetho.